Home > Products > LED Grow Light > ခေါက်သိမ်းနိုင်သော LED အလင်းကြီးထွား > 600 Watt LED ဒေါင်လိုက်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အလင်းကြီးထွား
samsung နှင့် Hydroponic led light သည်ကြီးထွားလာပြီး Orsam LED သည်အထွက်နှုန်းအများဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအလင်းရောင်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 600 Watt LED ဒေါင်လိုက်လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက်အလင်းကြီးထွားလာသည် PPFD တွင် PPFD တွင် 50% ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း HID မီးအိမ်များထက်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၃၇% ပိုမိုနိမ့်သည်။ 8-bar ပါသော Hydroponic led ၏အလင်းရောင်သည် samsung နှင့်ကြီးထွားလာပြီး Orsam LED သည်အခန်းအားနိမ့်ကျသောနေရာများ၊ ဒေါင်လိုက်ထိန်သိမ်းရာနေရာများ၊ လှိမ့်ခုံတန်းရှည်များသို့မဟုတ်ရွက်ဖျင်တဲများတွင်တောင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ပိုမို၍ ဦး ဆောင်သောကြီးထွားသည့်အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များကိုသင်၏တောင်းဆိုချက်အရပေးနိုင်ပါသည်။ သင်၏မေးမြန်းမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါတယ်။
This 600 Watt LED ဒေါင်လိုက်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အလင်းကြီးထွားis powered by 600W Inventronics driver and it adopts sunlike full spectrum white LEDs and 660nm Red diodes to ensure its highest PPFD at 5*5ft flowering stage. It’s ETL listed and intended for both America and Europe market. We welcome your inquiry or more specification.
2. 600 Watt LED ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်) သည်ဒေါင်လိုက်လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက်အလင်းပေးသည်
ထုတ်ကုန်အမည်: 600 Watt LED ဒေါင်လိုက်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အလင်းကြီးထွား Light distribution: 120°
Model No.: ခြင်္သေ့ -GL600WHF3-08YD-0101 အပူစီမံခန့်ခွဲမှု: Passive
မီးအိမ်အရွယ်အစား: 1184 * 1143 * 29mm မက်စ် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 50°C
LED အရေအတွက်: (340W+16R) * 8 Mounting height: မြတ်သောအထက် 15cm
Spectrum: Full spectrum ပစ္စည်း Alumnium
AC input power: 600W @277V အိုင်ပီအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - Wet location
Amperage: 277V @ 2.17A တစ်သက်တာ: > နာရီ 50000
LED driver အမှတ်တံဆိပ်: 1*600W Inventronics N. W.: 10,15 ကီလိုဂရမ်
PPF: 1680 μmol / s ကို ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား: 126x14x66cm
၃။ ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် 600 Watt LED ၏အသုံးပြုမှုသည်ဒေါင်လိုက်လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက်အလင်းပေးသည်
The 600 Watt LED ဒေါင်လိုက်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အလင်းကြီးထွားကွဲပြားခြားနားသောကြီးထွားလာအဆင့်ဆင့်အတွက်အပင်များအတွက်တိကျသောအလင်းအိမ်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ဆေးခြောက်၊ လျှော်နှင့်ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
၄.၆ ဝပ်ဝပ် LED ၏ထုတ်ကုန်အရည်အချင်းသည်ဒေါင်လိုက်လယ်ယာအတွက်အလင်းကိုပေးသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ 600 Watt LED သည်ဒေါင်လိုက်လယ်ယာအတွက်အလင်းပေးသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် ၀ တ်ဆင်ရန်မပျက်စီးနိုင်စေရန်အတွက်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောပစ္စည်းများဖြင့်ကောင်းစွာထုပ်ပိုးထားသည်။ အသေးစားသို့မဟုတ်နမူနာအမှာစာများကိုအမြန်ဆုံး UPS၊ FedEx သို့မဟုတ် DHL မှဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ အလွန်ကြီးမားသောအမှာစာများအတွက်ပင်လယ်ကုန်တင်ပိုပိုသည်။
hot Tags:: 600 Watt LED Grow Light For Vertical Farming, Manufacturers, Suppliers, Wholesale, Buy, Factory, Customized, Made in China, Free Sample, Price List, Advanced, Fashion, Quality